राजनीतिक नदीमा सङ्लो पानी : RajdhaniDaily.com
Home बिचार राजनीतिक नदीमा सङ्लो पानी
राजनीतिक नदीमा सङ्लो पानी
नेपालीलाई एउटै प्रश्नले पिरोलिरहेको छ: नेपाली राजनीतिक नदीमा कहिले सङ्लो पानी बग्ला ? नेपाली राजनीतिक नदीमा जसले सङ्लो पानी बगाउँछु भनेर विगतमा लागे, अझै पनि लागिरहेका छन्, तिनीहरूले नै यो राजनीतिक नदीलाई फोहोर बनाइरहेका छन् । फोहोर नदीलाई सफा बनाउँछु भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूले भएको नदीलाई अझ धेरै प्रतिशतले फोहोर बनाउनु यो ज्यादै विडम्बनापूर्ण र निन्दनीय छ । बरु नदीलाई केही सफा गर्छु भनी केही प्रतिशत सफा गर्नु भनेको आफ्नो इमानदारिता हो । तर, यहाँ सुशासनको नाममा कुशासन भएको छ । विकासका नाममा विनाश भएको छ । समाजवादको नाममा दलाल पुँजीवाद भएको छ । न्याय र समानाताको नाममा अन्याय र असमानता बढेको छ । त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रको नाममा अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको बढोत्तरी भएको छ । राष्ट्रवादको नाममा अराष्ट्रवाद भएको छ अर्थात् अराष्ट्रवादी तŒवहरूको हालीमुहाली भएको छ ।
राजनीति देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको टाउको हो । सबै नीतिहरूमा उत्कृष्ट नीति नै राजनीति हो । समग्र समाजको हितका लागि काम गर्न सक्ने मूल विद्या राजनीति नै हो । राजनीति र समाज एक अर्काका परिपूरक हुन् । त्यति मात्र होइन, राजनीतिबाहेक अरू कुनै विद्याबाट पनि समाजको सम्पूर्ण परिवर्तन सम्भव छैन । पटकपटकको राजनीतिक खिचातानी, कोलाहल र अराजकताले यतिबेला समाजका रङहरू खुइलिँदै गएका छन् । के हाम्रो राजनीतिले सामाजिक मान्यता र गरिमा भत्कदै गएका छन् ? हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई किन राजनीतिले ठीक ढंगले चिन्न सकेन ?
राजनीति एउटा कला हो । यति मात्रै होइन, यो एउटा विज्ञान पनि हो । राजनीति भनेको एउटा त्याग हो, व्यवसाय होइन । तर, अहिले राजनीति त्याग नभएर एउटा ठूलो व्यवसाय बनेको छ । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान के छ भने राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो । अर्थात् यो एउटा गरिब, निमुखा, पहँुचविहीन र सामथ्र्यविहीन माथि शोषण दमन गरेर आफ्नो दुनो सोभ्mयाउने खेल हो । राजनीति जहिल्यै पनि सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको इमानदारपूर्वक अनुशरण गर्नुपर्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा यसको अभाव छ ।
सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने कम्युनिस्टले संसदीय शासन सत्ता चलाउने कुरा बिल्कुलै गलत हो
मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताले समृद्धि र स्थिरता चाहना राख्ने गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको आमनिर्वाचनबाट जनताले स्थिर सरकार गठनका लागि अभिमत प्रकट गर्दै आएका छन् । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि जनचाहनाअनुसार आर्थिक विकास र समृद्धि त भएन नै, उल्टै सत्तारूढ दलभित्रको कलहले कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेनन् । दलीय विवादले पटकपटक आन्दोलनमार्फत भएका राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्दा मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा प-यो । अस्थिरताको जग बनेको भन्दै राजतन्त्र फ्याँकिए पनि संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी ग-यो । सरकार गठन र विधानबाट वाक्क बनेका जनताले नयाँ संविधानसँग फेरि स्थिर सरकारको चाहाना राखे । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले र माओवादी (केन्द्र) बनी मिलेको नेकपालाई दुई तिहाइ बहुमत मिल्यो । संघीय सरकारमा मात्रै होइन सातवटा प्रदेशमध्ये पनि ६ वटा प्रदेशमा उनीहरूकै सरकार बन्यो । अझ स्थानीय सरकार त अधिकांश उनीहरूकै पकडमा ब-यो । तैपनि उनीहरूले शोषित, पीडित, किसान, मजदुरको पक्षमा काम गर्न सकेनन् । कारण थियो, यिनीहरूको चरित्र कम्युनिस्ट थिएन । यिनीहरू कम्युनिस्ट ब्रान्डमा चरम संसदीय अभ्यासलाई मजबुत बनाउने खेलमा उद्धत भए ।
सैद्धान्तिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने कम्युनिस्टले संसदीय अभ्यासबाट शासनसत्ता चलाउने कुरा बिल्कुलै गलत हो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नु अनि शासकीय प्रणाली फोहोरी संसदीय अभ्यासको नीति अपनाउनु झुट, बेइमान, ठगको खेती अपनाउनुजस्तै हो । आज शासनसत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रूपमा कम्युनिस्ट भए पनि सारमा दलाल संसदीय पार्टी हो । हिजो लामो समयसम्म संसदीय अंक गणितीय फोहोरी राजनीतिको निष्कर्ष निकाली माओवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध सुरु ग¥यो । जनयुद्धको लक्ष्य थियो साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पारी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने र त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहारा अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउँदै मानवजातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्य थियो । तर, प्रचण्डले जितको नजिक पुग्न लागेको क्रान्तिलाई धोका दिई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाई सत्तामा जाने र त्यसको स्वाद लिने योजना बनाए । तदअनुरूप उनी संसदीय प्रणालीको यात्रामा अघि बढे ।
मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि नवधनाढ्य वर्गको जन्म भएको छ । राज्य कमजोर भएको मौका छोपी यिनै वर्गले तस्करी र कालोबजारीमार्फत करोडौं कमाएका छन् । स्वंय जनयुद्ध गरेका कान्तिकारी नेतासमेत नाटकीय ढंगले काठमाडौंका सुविधासम्पन्न महल कब्जा गर्न थाले, करोडौं पर्ने चिल्ला गाडीमा सवार गर्ने भए । परन्तु जे कारणले जनयुद्ध भएको थियो वा जनआन्दोलन उठेको थियो, ती मुद्दा सडकमा छरपस्ट छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्रले सबै स्वतन्त्रताको चाङ लगाए पनि जनताको खाली पेट सधैंभर सुतिरहन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको छलाङ जति नै आकर्षित भए पनि तथा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने माध्यमा हुन सकेन भने त्यसको खासै अर्थ र महŒव रहन सक्दैन ।
शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले सुशासनको डम्फु बजाएको झन्डै अढाइ वर्ष हुन लागेको छ । यद्यपि, सुशासन संकट झन् बढ्दो रूपमा छ । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ । जहाँ हे¥यो, त्यही भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहेको देखिन्छ । विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले महामारीको संकट समाधानका लागि प्रयत्नशील छन् । भ्रष्टाचारको मुखै नहेर्ने दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा फसेको छ । कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्ने देशको अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँ सरकार अग्रपंक्तिमै आएर काम सम्पन्न गरेकै देखिन्छ । सरकारका सबै निकाय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, कर्मचारी, प्रहरी, सेना सबै क्रियाशील छन् । तर, हाम्रो सरकार महामारीमा उल्टो भयो, लकडाउन (बन्दाबन्दी)का बेला अनियमितता, भ्रष्टाचार पो मौलाएको देखियो ।
कोभिड–१९ ले दिन प्रतिदिन जनजीवन थप भयावह बनाउँदै लगेको छ । महँगीले बजार भाउ अकासिएको छ । रोजगारीका अवसरहरू क्रमशः खुम्चदै गएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित सर्वसाधारण मानिस उपचार नपाएर छट्पटिदै मरिरहेका छन् । करिब ८० लाख बालबालिका झन्डै ६ महिनादेखि घरमै छन् । शैक्षिक सत्र खारेजी हुनेदिशा तर्फ जाँदै छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । अनियमितता विगतमा भन्दा धेरै देखिएको छ । वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सुशासनसहितको समाजवाद उन्मुख निर्दिष्ट गरे पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार उन्मुख अधिनायकवादतर्फको यात्रामा अघि बढेको छ । उसका कतिपय क्रियाकलापले यसको पुष्टि गरिसकेका छन् । कुकरको पुच्छर १२ वर्षसम्म ढुंगामा राख्दा पनि बांगाबांगै हुन्छ भन्ने उखान सत्तामा रहेर जनमतविपरीतका काम गर्ने नेतासँग मिल्न गएको छ । नेपाली जनताले कहिले राजीतिको नदीमा सङ्लो पानी बगेका देख्न पाउलान् यसै भन्न नसकिने अवस्थामा छ ।
काठमाडौं । लोकप्रिय लेखक नयनराज पाण्डेको नवीनतम कृति ‘जियरा’ सोमबारबाट बजारमा आएको छ । गत चैतमै पुस्तक बजारमा पठाउने तयारी गरिए पनि कोभिड सङ्क्रमितको...
राजभण्डारीको सहयोगमा पीडितलाई राहत
काठमाडौं । एसियाली खेलकुदको तेक्वान्दोका कीर्तिमानी रजत विजेता सविता राजभण्डारीको सहयोगमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण मारमा परेका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलगायत पीडित परिवारलाई मंगलबार...
Not-to-be-missed Kumar Raut - November 5, 2020 0
लकडाउनमा आलु प्याजको कालोबजारी गर्ने पक्राउ
प्रदेश २ Kumar Raut - March 26, 2020 0
जनकपुरधाम । ‘लक डाउन’को मौकाछोपी आलु र प्याजको कालोबजारी गर्ने ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जनकपुरधाम वडा नम्बर ४...
गाडीकाे पास छ भन्दैमा काठमाण्डाै नआउनुहाेला, नागढुंगाबाट फर्किनु पर्छ
प्रदेश ३ Dhruba Lamsal - May 5, 2020 0
काठमाडाै‌ । सवारी पास बनाइहालेँ, अब ढुक्कसँग उपत्यका जान्छु भनेर तपाईंले धारणा बनाउनुभएको छ ? या त अब सवारी पास बनाइएर उपत्यका जान्छु भन्ने...
भर्खरै Dhruba Lamsal - July 9, 2020 0
‘यहि जिल्लाबाट छानिएका सांसद अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउछु भनेर किन भन्न सक्दैनन ?’
प्रदेश ३ Dhruba Lamsal - January 31, 2021 0
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी नेकपा ओली समुहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियता र सीमा विवादबारे हिम्मतका साथ बोल्दा आफूलाई आफ्नै पार्टीबाट...
बराबरीले बार्सिलोनालाई धक्का
मड्रिड । सेभिल्लासँग निराशाजनक बराबरीमा रोकिएपछि शीर्षस्थानमा रहेको बार्सिलोनालाई स्पेनिस ला लिगाको उपाधि यात्रामा धक्का लागेको छ । क्याटलान क्लब बार्सिलोना सेभियासँग गोलरहित बराबरीमा...
पाकिस्तानमा हिन्दू मन्दिर हस्तान्तरण गरियो
अन्तराष्ट्रिय Rajdhani Daily - February 8, 2020 0
बलुचिस्तान । पाकिस्तानको बलुचिस्तानको जोब जिल्लामा निकै समय अघिदेखि बन्द रहेको मन्दिर हिन्दू समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । जोबको जिल्ला...
कोरोनाविरुद्ध गेयाको सहयोग
खेल Kumar Raut - March 28, 2020 0
लन्डन । स्पेन तथा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइेटडका गोलरक्षक डेभिड डी गेयाले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नका लागि ३ लाख युरो सहयोग गरेका छन् । स्पेनमा...
रुपन्देही । कञ्चन गाउँपालिकामा बोक्सीको आरोपमा ससुराले आफ्नै बुहारीमाथि बञ्चरो प्रहार गरेका छन् । कञ्चन ३ धौलागिरि चोकका ५४ वर्षीय चन्द्रमणि पौडेलले बिहीबार ...